Singapaoro · Oktobra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Singapaoro · Oktobra, 2018
Tantara mikasika ny Singapaoro tamin'ny Oktobra, 2018
Toherin'ny Fanjakana ny Tsanganandahatsoratry ny Blaogera iray
Hehy 18 Oktobra 2018
Nanoratra tsanganandahatsoratra iray tao anatina gazety miresaka momba ny fiakaran'ny vidim-piainana i mr.brown, Singapaoreana mpitoraka blaogy malaza. Namaly tao anatin'izany gazety izany ihany ny mpitondra teny iray avy amin'ny governemanta.
Fahalalahàna miteny 18 Oktobra 2018
Fanakanana ny Lahatsary Bubble Gum (Siligaoma) ary i Singapaoro
Fitantanam-pitondrana 17 Oktobra 2018
Nifandray tamin'ny Tomorrow.sg, ilay metablaogin'i Singapaoro ny lahatsary iray nitondra ny lohateny hoe ''Bubble, Bubble, Toil and Trouble'' novokarin'i Nicholas Carlton. Novokarina tao Singapaoro ary maneho ny fanakanan'i Singapaoro ny lahatsary Bubble Gum ny ampahany amin'ilay lahatsary.
Fitantanam-pitondrana 03 Oktobra 2018
Ny 17 May 2010, nandrava ny sakana manodidina ny fanatobian'entana ao amin'ny orinasan’ny fitaterana nasionaly sy nandoko izany tamin'ny graffiti ilay teratany Soisa sy ilay Britanika mpiray tsikombakomba taminy. Melohina telo taona an-tranomaizina fara-faha-betsany ny fanimbazimbana ao Singapaoro sy famaizana kapoka tsora-kazo in-telo ka hatramin’ny im-balo.